Ahoana no fomba ahafahako mandinika ny fikarohana fototra momba ny Amazon amin'ny fomba tsara?
Amin'izao androntsika izao, Amazon dia nanjary anarana an-trano ny fikarohan'ny vokatra ao amin'ny Internet. Ary ny rehetra dia afaka manandrana manosika vokatra iray any - miaraka amin'ny mpividy mavitrika manodidina ny 80 tapitrisa izay ny tombana tokana dia ny hoe ny lisitry ny vokatrao dia tokony ho hitan'ny maro mpividy indrindra araka izay tratra. Mihevitra aho fa ity tsena goavam-be ity dia manana algorithm manokana izay sahy milaza fa miasa tahaka izany amin'ny fikarohana an-tserasera efa fantatry ny mpiserasera manerana izao tontolo izao efa ho roa taona mahery izao (ohatra, avy amin'ny Google mihitsy. eo). Izany no mahatonga ahy mino fa ny fanalahidin'ny fahombiazan'ny mpandraharaha elektronika maoderina mivarotra ny fakany dia avy amin'ny fikarohana fototra ho an'ny vokatra Amazon. Mazava ho azy, misy orinasam-barotra mafonja mbola ilaina mba ho lasa mpivarotra lehibe ao amin'io sehatra maro be io. Aza milaza fa tsy handany fotoana firy amin'ny fikarohana fifaninanana ianao hitarika anao. Na izany aza, azoko antoka fa ny tetikasa fanatsarana ny lisitra dia ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa manatsara kokoa ny fikarohana amin'ny Internet. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho anao amin'ny fomba fiteninao ny fomba fikarakarana fikarohana teny ho an'ny vokatra Amazon - ary mialà amin'ny fifaninanana karakarainao.
Tier 1: Seeds Keywords
Manomboka amin'ny fikarohana lehibe amin'ny teny malaza amin'ny vokatra Amazon mba hametrahana ireo tanjona lehibe indrindra ao amin'ny bar of Google. Amin'izany fomba izany, dia hahita sary feno amin'ny fomba mety hitadiavan'ny olona ny zavatrao ianao. Avy eo, mifantoha amin'ny teny lavalava lava sy tsotsotra mifandraika amin'ny lozanao. Ankoatra izany, fanapahan-kevitra tsara ny manara-maso ny mpihazakazaka lehibe amin'ny fitantanana ny orinasa misotro ronono mandritra ny taona maro. Eto dia rehefa tafiditra daholo ireo fitaovana fanaraha-maso manokana sy ireo rafitra an-tserasera.
Tier 2: Tetikasan-tsaina
Ny dingana manaraka dia ny fisafidianana ny fitaovana fikarohana fototra ho an'ny vokatra Amazon. Soa ihany fa misy karazana safidy maro samihafa, ny ankamaroan'izy ireo dia misy amin'ny fidirana mivantana. Mazava ho azy, ny sasany amin'izy ireo dia azo omena alalana afa-tsy, fa mbola maro be ny mpanampy sy azo antoka tsy mandoa vola. Raha ny tena izy, tsy misy mpitaingina izy io ary afaka manapa-kevitra hoe inona no fitaovana horaisina - raha ny marina, ny ankamaroan'izy ireo dia natao indrindra amin'ny fikarohana teny filamatra mba hanomezany soso-kevitra sariohatra manan-danja amin'ny farany.
Ary eto dia tonga eto isika izao. Ny zava-misy dia rehefa mandroso fikarohana amin'ny teny malaza amin'ny vokatra Amazon ianao, dia mety ho diso tafahoatra amin'ny hevitra an'arivony amin'ny teny filamatra mahaliana. Noho izany, ny fanamby lehibe dia ny manapa-kevitra hoe iza ireo tena mendrika ary mendrika ny hita ao amin'ny lisitrao. Amin'izany fomba izany, ataovy azo antoka ny fandinihanao tsara ireto manaraka ireto:
Fikarohana fikarohana - metrika fototra izay mampiseho ny habetsahan'ny olona amin'ny firenena nampiasa ny tenimiafinao amin'ny fangataham-pikarohana .
Klioketsa - dia manondro ny hoavin'ny ankapobeny ny teny fanalahidy hahatonga ny fifamoivoizana sy fampiasana matetika ataon'ny mpividy.
Complexity - Raha tsy izany, dia ny fahasarotan-teny manan-danja, tokony hampiasainao ny mitady fikarohana mety fohy mety hahatonga ny fifamoivoizana kokoa amin'ny lisitry ny vokatrao Source .